Ogaden News Agency (ONA) – Denmark oo Shir balaadhan Lagu Qabtay.
Denmark oo Shir balaadhan Lagu Qabtay.
Posted by ONA Admin	/ May 17, 2014
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 16/5/2014, lagu qabtay caasimada wadanka Denmark ee Copenhagen shir balaadhan ooy sooqaban qaabisay Jaaliyada Somalida Ogadenya. Shirkan oo ahaa mid aad uqiimo badan oo siwanaagsan loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay Hawlwadeenka jaaliyada iyo Masuuliinta Jabhada Wadaniga Xoraynta ( JWXO) ee kahawlgala wadanka Denmark.
Kulankan oo kamid ah kulamadii caadiga ahaa ee Jaaliyada Somalida Ogadenya ayaa lagaga wada arinsaday hawlaha Halganka guud ahaan gaar ahaan dhacdooyinkii udambeeyay ee Ogadenya kadhacay iyo xaalada kasoo cusboonaatay Itoobiya.
Dhanka kale waxaa siqoto dheer leh looqaadaa dhigay waxqabadka Jaaliyada taasoo ay xubnuhu siheer sare ah ooga wada doodeen. Falanqayn iyo dood wadaag kusaabsan qorsheyaasha udajisan ajendaha jaaliyada iyo yoolalka mustaqbaka lahigsanayo hirgalinteeda. Waxaa kale oo siwanaagsan la,isugu balansaday sidii kor loogu qaadi lahaa loona dardar galin lahaa horumarinta Hawlaha Halganka. Shirkan ayaa kusoo dhamaaday natiijo wanaagsan oo lagagaadhay ajendeyaashii kulanka laga lahaa.